Impilo yezakhamuzi iyisikhombisa esiqondile sokuthuthukiswa komnotho kombuso kuphela, kodwa futhi nendawo indawo uhulumeni asebenza ngayo ohlelweni lwezomnotho emhlabeni. Phela, ngesisekelo samandla okukhiqiza kwanoma yiliphi izwe umsebenzi womuntu, futhi ukuthi izakhamuzi zombuso zizoba nempilo kangakanani, okuwusizo kakhulu kanye nekhwalithi kuyoba umsebenzi wabo. Yingakho ukuchuma komnotho wezwe kanye namandla akhe okuncintisana ohlelweni lokuhweba ngamazwe kuxhomeke kubantu abathile kanye nempilo yabo.
Inendima ebalulekile kule ndaba idlalwa ngumthetho wokuvikela impilo yomphakathi, ebeka izimiso nemigomo yokuvikela impilo yabantu bakithi, kanye nokuvimbela izifo. Kumele kugcizelelwe ukuthi, ngeshwa, naphezu kokukhathazeka okubikiwe kwezempilo izakhamuzi, umbuso empeleni awufezi izibopho zayo kule ndaba. Umuthi wamahhala uhlala kuphela ephepheni, kanti empeleni, uma kwenzeka kube nezinkinga ezinkulu, umuntu angalindela ukwelashwa okujulile kuphela uma kwenzeka imali ehambelana nesikhungo sezokwelapha. Yiqiniso, umuntu akufanele akhonze yonke into evamile ifanelana, kodwa uhlelo luqhubeka lusekelwe ekufumbathweni nasekukhokhweni.
Muva nje, amandla ombuso athethwe kancane kancane ukuqinisa ukulawulwa kokugcwaliseka kwezibopho zalo yizikhungo zezokwelapha nabaholi babo, ngenxa yalokho kuyobe kungenzeka ukuba nethemba lokushintsha okuhle kulokhu.
Muva nje, u-State Duma wethule umthetho omusha ngokuvikelwa kwempilo yomphakathi, lapho kunakekelwa okungaphezulu ukuvikela impilo yomphakathi nokuvimbela izifo ezihlukahlukene. Umthetho omusha uphinde uqondise ubuhlobo obuvela phakathi kwesiguli kanye nabasebenzi bezokwelapha, lapho amalungelo nezibopho zabo ngamunye ezixoxwa ngayo ngokuningiliziwe. Ngaphezu kwalokho, umthetho wokuvikelwa kwempilo yomphakathi ulawula izisekelo zenhlangano, zomthetho nezomnotho ekuvikeleni impilo yabantu kuphela, kodwa wonke umphakathi jikelele. Okugcizelelwe kakhulu yizincomo zokuziphatha ngendlela enempilo, ukuthuthukiswa kwamaqembu ezemidlalo nezemidlalo zezingane.
Ngeshwa, impilo yezingane zethu namuhla ayihlangabezani nemigomo nezidingo eziyisiqinisekiso sokuphila okunempilo nokujabulisayo kubantu abasha. Ngakolunye uhlangothi, lokhu kubangelwa izinga eliphansi lokuphila kwengxenye enkulu yabantu, ngakolunye uhlangothi - izinga elibi lemikhiqizo yokudla kanye nokuntuleka kwamavithamini abalulekile. Ngokwezinga elithile, isiteshi sehlanzekile kanye nesifo se-epidemiological, esingazi ukuthi ngaso sonke isikhathi sibheka ukudla okungalungile, sibheka ubuthi bezingane ezinkulisa nezikole ezikhathini eziningi.
Isisekelo somthetho ngokuvikelwa kwezempilo sithi impilo yomuntu kanye nempilo iyigugu kakhulu kuhulumeni, ngakho-ke, ukuthuthukiswa okuqhubekayo kwenziwa ngalokhu. Ngokuphathelene nezingane, kunezidingo ezingathí sina, eziqala ngezimo zokuhlala kwazo kanye nemali engenayo yabazali, ekuvikelweni kwamalungelo wengane. Ngakho-ke, umthetho wokuvikela impilo yezakhamuzi ufeza umsebenzi omkhulu wokuhlinzeka iRussia Federation ngezimo zokusebenza ezamukelekayo kuphela, kodwa futhi kuqinisekiswe ukuthi izidakamizwa kanye nokuphathwa kokwelapha kulabo abayidingayo.
Ngakho-ke, naphezu kobunzima bomnotho emnothweni wezwe, owathinta izwe lethu, izwe lethu liyaqhubeka liqinisa izikhundla zalo emhlabeni, lihamba phambili endleleni yokuthuthukiswa komnotho. Futhi vumela le nqubo ingakapheli ngokwanele, kodwa lo mkhuba uqobo usuvele uvuselela ithemba lokuthi kuzoba ngcono ezimweni zokuphila. Futhi umthetho wokuvikela impilo yomphakathi udlala indima enkulu kule ndaba.
Uma umuntu esanyamalala eMoscow, kuphi? I-algorithm yezenzo
Izinyathelo zokuphepha ekulungiseni i-BTWT
Kuyini bayibutho mercenary, futhi lapho kwakubonakala sengathi?
Palette imibala: ukhilimu izicathulo "Intulo", spray impregnation
KrAz-257: izici futhi izici
Siphikelele uqalisa - kuyini? Ungahlela kanjani izinhlelo uqalisa Windows
Ifoni Hambayo LG Leon: ukubuyekezwa, ukubuyekeza kanye nokusebenza. Smartphone LG Leon H324: Ukubuyekeza
Utshani isigqoko - accessory stylish isithombe ehlobo
Umlando Kobrin Polytechnic College, ikhethelo, ikheli
Ingqikithi ugesi. Ugesi - lena ...